အကောင်းဆုံးသော ပွင့်လင်း ရင်းမြစ် ပြစက် ဖြစ်သော VLC မီဒီယာ ပြစက် ၏ တရားဝင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် နေရာ။ - VideoLAN
စည်းမျဉ်း & အဖွဲ့အစည်း
အတိုင်ပင်ခံ ဝန်ဆောင်မှု့ & မိတ်ဖက်များ
VideoLAN, စီမံကိန်း နှင့် အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်း.
VLC သည် အခမဲ့ နှင့် ပွင့်လင်း ရင်းမြစ် အမျိုးမျိုးသော စနစ်တို့ ကွဲပြားသော မာတီမီဒီယာ ပြစက် နှင့် အမျိုးစုံသော မာတီမီဒီယာ ဖိုင်များ ဒီဗီဒီများ၊ အသံ စီဒီများ၊ ဗီစီဒီများ နှင့် အမျိုးမျိုးသော တိုက်ရိုက်လွှင့်ပြသ သော ပရိုတိုကော တို့ ပြသနိုင်သည့် အခြခံ မူဘောင်လည်းဖြစ်သည်။
VLC သည် အခမဲ့ နှင့် ပွင့်လင်း ရင်းမြစ် အမျိုးမျိုးသော စနစ်တို့ ကွဲပြားသော မာတီမီဒီယာ ပြစက် နှင့် အမျိုးစုံသော မာတီမီဒီယာ ဖိုင်များနှင့် တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်ပြသည့် အမျိုးမျိုးသော ပရိုတိုကော တို့ ပြသနိုင်သည့် အခြေခံမူဘောင် လည်းဖြစ်သည်။
ရိုးရှင်း၊ မြန်ဆန် ကာ စွမ်းဆောင်ရည် ပြည့်ဝသည်
အရာအားလုံး ဖွင့်လှစ်ပြသ နိုင်သည် - ဖိုင်များ၊ အခွေများ၊ ဝက်ဘ်ကင်မရာများ၊ ကိရိယာများ နှင့် တိုက်ရိုက်ပြသခြင်းများ
ကုဒ် ဖိုင်များ ထပ်မံမလိုအပ်ပဲ ကုဒ်အများစု ကို ဖွင့်လှစ်ပြသနိုင် - MPEG-2, MPEG-4, H.264, MKV, WebM, WMV, MP3...
အားလုံးသော စနစ် များ တွင် အလုပ်လုပ်နိုင် - Windows, Linux, Mac OS X, Unix, iOS, Android ...
အလုံးစုံ အခမဲ့ - စပိုင်ဝဲ မပါ၊ ကြော်ြငာ မပါ၊ အသုံးပြုသူ နောက်ယောင်ခံမှု မပါ
အခွံများ ပြုလုပ် ရန် VLC အခွံ editor ဖြင့်.
ထည့်သွင်းရန် ထပ်တိုး စနစ်များ.
အတွက်ဗီအလ်စီရယူ Windows Store
အတွက်ဗီအလ်စီရယူ Windows Phone
အတွက်ဗီအလ်စီရယူ Mac OS X
အတွက်ဗီအလ်စီရယူ Apple TV
အတွက်ဗီအလ်စီရယူ Debian GNU/Linux
အတွက်ဗီအလ်စီရယူ Gentoo Linux
အတွက်ဗီအလ်စီရယူ Arch Linux
အတွက်ဗီအလ်စီရယူ Slackware Linux
အတွက်ဗီအလ်စီရယူ Red Hat Enterprise Linux
အတွက်ဗီအလ်စီရယူ Chrome OS
Language: Afrikaans | Afrikaans Amharic | አማርኛ Aragonese | အာရာဂွန် Arabic | العربية Assamese (India) | অসমীয়া (ভাৰত) Asturian | asturianu Azerbaijani | azərbaycan Belarusian | беларуская Bulgarian | български Bangla (Bangladesh) | বাংলা (বাংলাদেশ) Bangla (India) | বাংলা (ভারত) Breton | brezhoneg Bosnian | bosanski Catalan | català Corsican | ခိုစီကန် Czech | čeština Welsh | Cymraeg Danish | dansk German | Deutsch Divehi | ဒီဗာဟီ Greek | Ελληνικά English (United Kingdom) | English (United Kingdom) Spanish | español Spanish (Mexico) | español (México) Estonian | eesti Basque | euskara Persian | فارسی Finnish | suomi Faroese | føroyskt French | français Western Frisian | Frysk Irish | Gaeilge Scottish Gaelic | Gàidhlig Galician | galego Gujarati (India) | ગુજરાતી (ભારત) Hebrew | עברית Hindi | हिन्दी Croatian | hrvatski Hungarian | magyar Indonesian | Indonesia Icelandic | íslenska Italian | italiano Japanese | 日本語 Georgian | ქართული Khmer | ខ្មែរ Kannada | ಕನ್ನಡ Korean | 한국어 Kyrgyz | кыргызча Luxembourgish | Lëtzebuergesch Lao | ລາວ Lithuanian | lietuvių Latvian | latviešu Macedonian | македонски Malayalam | മലയാളം Mongolian | монгол Marathi | मराठी Malay | Melayu Burmese | မြန်မာ Burmese (Myanmar [Burma]) | မြန်မာ (မြန်မာ) Norwegian Bokmål | norsk bokmål Nepali | नेपाली Dutch | Nederlands Norwegian Nynorsk | nynorsk Odia (India) | ଓଡ଼ିଆ (ଭାରତ) Polish | polski Portuguese (Brazil) | português (Brasil) Portuguese (Portugal) | português (Portugal) Romanian | română Russian | русский Sardinian | ဆာဒီနီးယား Sinhala | සිංහල Slovak | slovenčina Slovenian | slovenščina Albanian | shqip Serbian | српски Swedish | svenska Tamil | தமிழ் Telugu | తెలుగు Thai | ไทย Turkish | Türkçe Tatar | татар Uyghur | ئۇيغۇرچە Ukrainian | українська Urdu | اردو Uzbek | o‘zbek Vietnamese | Tiếng Việt Walloon | ဝါလူးန် Chinese (China) | 中文（中国） Chinese (Taiwan) | 中文（台灣）
ဥပဒေရေးရာ | Report Trademark Abuse